Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo: ny programa sy fampiharana tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo
Encarni Arcoya | | sary
Alaivo an-tsaina hoe manana hetsika lehibe tokoa ianao, na te haka an'io sary hitanao io ary tsy te hanadino an'izao tontolo izao. Fa rehefa maka ny sary ianao dia mahatsapa fa manjavozavo. Ary tsy afaka miverina amin'ny fotoana nihatsara ianao. Ka ahoana no ahitanao ny sary manjavozavo?
Minoa na tsia, misy fomba maro hanaovana azy, ary tsy amin'ny PC ihany no azonao atao mianatra manamboatra sary manjavozavo an-tserasera, miaraka amin'ny Photoshop, miaraka amin'ny iPhone, misy rindranasa ... Androany, manome safidy maromaro izahay mba tsy ho ratsy tarehy io sary anananao io.
1 Fandaharana hanamboarana sary manjavozavo
2 Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo amin'ny PC
2.4 Aza milamina
3 Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo amin'ny Internet
4 Amboary ny sary manjavozavo amin'ny finday Android na iOS
4.3 Aorian'ny fifantohana
Fandaharana hanamboarana sary manjavozavo
Talohan'izay, rehefa nahazo sary manjavozavo ianao, na inona na inona itiavanao azy dia nofongaranao io satria sary tsy azo averina io, indrisy, tsy afaka naka sary mazava ianao. Fa raha iray amin'ireo maniry te-hamerina ireo fahatsiarovana ireo ianao, ary ambonin'izany rehetra izany, omeo fotoana faharoa izy dia tokony ho fantatrao fa misy fomba hanatanterahana izany. Ary tsia, nna izy rehetra dia milaza fa tsy maintsy manana fahaizana na fiofanana mifandraika amin'ny sary ianao. Raha ny marina dia tsy mila manam-pahaizana ianao fa olona mahay mitady vahaolana.
Ary misy programa momba ny fanamboarana sary manjavozavo. Ireo dia mikendry ny hamaha ny olan'ny sary ivelan'ny fifantohana amin'ny alàlan'ny famoronana sary mialoha sy aoriana. Te hahafantatra an'iza izahay?
Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo amin'ny PC
Raha te hampiasa ny solosainao hanatsarana ny ifantohan'ny sary ianao dia hahita safidy roa. Ny voalohany dia ny fampiasana programa izay tsy maintsy apetrakao amin'ny solosainao mba hampiasa azy ireo. Ny safidy faharoa dia mifototra amin'ny pejin-tranonkala ahafahanao mampakatra ny sary ary tompon'andraikitra amin'ny famerenana azy io izy ireo ka maranitra kokoa ny vokany noho ny voalohany.
Ny safidy roa dia marina, ary ny fampiasana ny iray na ny iray hafa dia hiankina amin'ny zavatra tianao hatao, ary koa ny maha-manjavozavo ny sary (satria misy programa na tranokala sasany mety tsy afaka manamboatra azy io tanteraka).
Raha misafidy ny safidy voalohany ianao, dia misy ireto programa manaraka ireto izay atolotray:
Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko sarimihetsika tsara indrindra misy, ary ambonin'izany rehetra izany Izy io no tena mifantoka amin'ny fanitsiana ireo "lesoka" amin'ny sary, toy ilay mivoaka tsy mifantoka sy / na manjavozavo. Ankoatr'izay dia mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy izy mba hanafoanana ny manjavozavo sy hamerenana ilay sary.
Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe manana sarin'ny biby fiompinao ianao ary nanetsiketsika ny lohany izy io, ka nahatonga ny sary nanjavozavo noho ny fihetsehana. Eny, ity programa ity dia mikarakara ny famahana ny olana ary manome anao sary mazava.
Na izany aza, manana fihemorana izy, ary tena teknika ity programa ity ka mety ho sarotra ny mianatra ny fomba fampiasana azy, ary mila fotoana be dia be izany ary miadana ny fikarakarana sary, izay mety hiafara amin'ny famoizam-po.
Ity programa ity azonao ampiasaina izany rehefa manana sary manjavozavo ianao nefa maivana, Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy mifantoka loatra ilay izy, dia tsy hahasoa anao loatra izany. Ny zavatra ataony dia ny manatsara ny maranitra sy manitsy ireo lesoka ireo, saingy tsy mahatratra an'io vokatra io amin'ny sary manjavozavo be.
Androany dia fantatsika ny Photoshop ary fantatray fa izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko fampiasa matetika amin'ny orinasa ary koa ao an-trano. Samy fantatra sy ny "clone" -ny, Gimp, ary hahafantatra ny fomba fanamboarana sary manjavozavo amin'ireto, mankanesa any amin'ny Filters / Sharpen. Eto, amin'ny faharetana kely dia azonao atao ny manitsy ny lesoka amin'ny sarinao mba hahitana endrika ankapobeny amin'ny sary.
Mazava ho azy, toy ny amin'ny fandaharan-tsary, mety handresy mpampiasa izy io, indrindra raha vaovao ianao. Ary tsy hahasoa anao loatra izany raha simba loatra ilay sary.
Izy io dia programa maimaim-poana sy taloha, saingy tsy hahomby amin'ny fanamboarana sary manjavozavo, ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny zavatra tsara momba an'io dia izany safidio fotsiny ny sary dia ho hitany ho azy ilay blur manana ianao ary hiezaka ny hanamboatra azy io ka hijanona tsy manjavozavo intsony.
Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo amin'ny Internet
Raha aleonao mampiasa pejy web hanamboarana ny sarinao, dia izao no soso-kevitray tsara indrindra:
Izy io dia iray amin'ireo tranokala malaza indrindra amin'ny fiarahana miasa amin'ny sary sy sary. Ho fanampin'izany, manana tombony izy fa editor an-tserasera maimaim-poana, noho izany dia tsy hatahotra ianao raha manamboatra ny sary fa tsy afaka misintona azy. Inona no tokony hataonao? Ny zavatra voalohany dia ny fitsidihana ny pejy. Any ianao dia tsy maintsy mampakatra ilay sary tianao hamboarina ary tokony ho eo amin'ny solosainao izany.
Raha vao hita izany, Tsindrio ny safidin'ny menio sivana. Raha vao ao anatiny dia tsindrio ny antsipiriany ary diovy, mba hanehoany anao fitaovana iray ahafahanao manitsy ny hamafin'ny sary. Rehefa hitanao tsara dia tsindrio ny save sy voila, hanana ny sarinao ianao.
Izy io dia programa hafa azonao ampiasaina amin'ny Internet. Mba hanaovana izany dia mila mankany amin'ny tranokala fotsiny ianao ary manokatra ny sary hiara-hamerina hipetraka miaraka aminy. Raha vantany vao azonao io dia kitiho ny bokotra "setting" ary, eo, "maranitra". Tsy maintsy mihetsika tsikelikely ianao mandra-pahitanao ny mazava mifanaraka amin'ilay sary. Ankoatr'izay, koa azonao atao ny manova ny famirapiratany sy / na ny fitovian'ny sary.
Ary voila, ny hany sisa ataonao dia ny mamonjy ny valiny.
Amboary ny sary manjavozavo amin'ny finday Android na iOS
Na manana Android na finday iOS (Apple) ianao dia misy ihany koa fampiharana izay ahafahanao manamboatra ny lesoka amin'ny sarinao. Manoro hevitra manokana izahay:
Izy io dia rindranasa azonao ampiasaina amin'ny roa (Android sy iOS) ary afaka manampy anao amin'ny famerenana sary ireo sary. Inona no tokony hataonao? Ampidino aloha ary sokafy ny fampiharana. Ao anatin'izany dia hiseho ny marika + hanampy sary. Raiso ilay ilainao hamboarina ary safidio ny "Sharpness." Noho izany, ny hataonao dia ny manitsy ny maranin'ny sary mandra-pahitanao azy tsara. Rehefa manao izany ianao dia kitiho ny Save ary hanana ny sary ianao.
Fampiharana iray hafa hampiasaina dia ity. Mila misintona sy manokatra azy fotsiny ianao. Vantany vao vita dia sokafy ny sary tianao hamboarina miaraka amin'ilay rindranasa ary dia izay. Raha ny marina dia tsy mila manao zavatra hafa ianao satria ny fampiharana mihitsy no mikarakara ny fanamboarana ny sary sy manome anao ny valiny mety indrindra.
Ka io no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ireo izay tsy manana hevitra firy.
Amin'ity tranga ity dia mila fanampiana kely ity app ity. Ary izany ve raha vao misokatra ny sary, tokony tondroinao ireo teboka hitanao fa tsy mifantoka na manjavozavo izany miasa aminy ary manamboatra azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ahoana ny fanamboarana sary manjavozavo
Bernardo riveira dia hoy izy:
Tena mandeha ho azy daholo. Saingy matetika tsy manome valiny tena tsara izy ireo.
Namboariko ny sasany (raha tsy manana safidy hafa aho, raha mpaka sary ianao, ahoana no fahitanao ny hanao ny iray amin'ny sehatra tsirairay fotsiny? kely indrindra 3) ... mampiasa ny maody LAB. Ovay ho lasa LAB ny maody loko ary ataovy eo amin'ny fantsom-pahazavana ihany ny maranitra.
Valiny tamin'i Bernardo riveira
App hanovana sary: ​​ireto no tsara indrindra